Like this:Like Loading...	147 Comments »
Ma wai is welcome!🙂
Phoe Zin ရေ ကျေးဇူးပါ။ ဟုတ်ကဲ့ အစားအသောက် အသစ်တင်တိုင်း သိနိုင်အောင် email subscription လုပ်သွားပါအုန်းနော်။ ၀တ်ရည်လည်း အတတ်နိုင်အောင် ဟင်းအသစ်အဆန်းတွေကို တင်သွားပေးပါမယ်..🙂
ဟီးဟီး.. ၀က်အူချောင်းတော့ မလုပ်တတ်ဘူး။ ၀ယ်ပဲ စားတတ်တာ…🙂
ဟုတ်ကဲ့.. ၀တ်ရည်တော့ မလုပ်ဖူးပေမယ့် လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါမယ်..🙂
အစ်မ . . . ဒီရက်ပိုင်းကျွန်တော်လည်း အလုပ်များနေတာနဲ့ အစ်မရဲ့ဆိုဒ်ကို မ၀င်ဖြစ်ဘူးဗျ . . .
UooSwar ရေ အီကြာကွေးလုပ်နည်း ရော၊ လုပ်ပုံပါ တစ်ကွ နောက် တစ်ပတ်ထဲ တင်ပေးပါမယ်… တင်ပြီးရင်လည်း အီးမေးနဲ့ အကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်..🙂
အမ ချက်တဲ့ ဟင်းနည်းလေးတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ် အခုတလော ကာဆင်ဘိုင် ကြက်သားသုပ် သုပ်စားချင်စိတ်ပေါ်နေလို့ နည်းလေးသိရင် မျှဝေပါအုန်းနော် အားပေးလျှက်
ပန်းအိရေ၊ ကာဆင်ဘိုင် ကြက်သားသုပ် ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ မသိဘူး.. ၀တ်ရည် မကြားဖူးလို့ပါ..🙂
၀က်ခြေထောက် စွတ်ပြုတ် တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်…🙂
ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် စံစံရေ…. အမြဲတမ်း ထမင်းမြိန်နဲ့ နေ့လေးများ ဖြစ်ပါစေ…🙂
၄. ပြီးနောက် နေရောင်လုံတဲ့နေရာမှာ ၂ ရက်လောက်ထားပါ။ (၂) ရက်ပြီးလို့ထုပ်ကြည့်ရင် ပဲမှာအညှောင့်ကလေးတွေထွက်လာတာတွေ့ပါမယ်။
ဆိုဒါမှုန့်ပမာဏက — yellow pea (500g) ဆိုရင်လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၁ ဝက်လောက်ပဲထည့်ရပါမယ် ။ ပြုတ်တဲ့အခါမှာလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြုတ်တယ်ဆိုတာမူတည်ပါတယ်။
Victoria ရေ Telephone brand agar အထုပ်သေးတစ်ထုပ်ကို ရေ ၃လီတာလောက် ထည့်ရပါမယ်။ ရေ၁လီတာ = ရေသန့်ဗူး ၁ဗူးစာ..😀
ဖြိုးတော့ မြှောက်ပြောနေပြန်ပြီ.. ကျေဇူးတင်တဲ့ အနေနဲ့ ကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေ အားလုံး အ၀စားသွားနော်..🙂
ဟုတ်ကဲ့ ဒီတပတ်အတွင်း ပြန်ဖြေပါ့မယ်နော်…😀
hi ah ma wutyee, where can i find အီကြာကွေး receipe?
မယ်မဒီကိုလည်း အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…😀
နှင်းလေး ရေ ၀တ်ရည်ဟင်းတွေ ချက်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော်…. ငါးသလောက်ပေါင်း ချက်နည်းလေး နောက်ကျတင်ပေးပါ့မယ်နော်..😀
အုန်းထမင်း ချက်နည်း https://getacookrecipe.wordpress.com/2011/04/19/အုန်းထမင်းနှင့်-ကြက်သား/ မှာတင်ပေးထားပါတယ်..😀
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်။ တင်မယ်တင်မယ်နဲ့ ခုထိ မတင်ဖြစ်သေးလို့..🙂
၀တ်ရည် ကင်နေကျတော့ ကင်ပြားကို ဆီအနည်းငယ် အရင် သုတ်ပေးပါ။ ပြီမှ ကြက်အူချောင်းကို ကင်ပြားပေါ်တင်ပြီး မီးအသင့်တင့်နဲ့ ကျက်သည်အထိ တဖက်စီလှန်ပြီ ကင်လိုက်ရုံပါပဲ။ အချိန်က ၂မိနစ်လောက်ဆို ရပါပြီ ဟန်လေး..🙂
တွေပါ။ မလုလုဟင်းချက်ဘလောက်ကတော့ ဟင်းတွေ တော်တော်စုံတာမို့ ဟန်လေး သဘောကျပါလိမ့်မယ်.. ကျေးဇူး..🙂
0ven နဲ့ကင်ရင် ၀တ်ရည် အချိန်တိုတိုနဲ့ မြန်မြန်ကျက်ချင်ရင် ၀တ်ရည် ပုံမှန် ၂၀၀ဒီဂရီလောက်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အထဲက အသားတွေပါ ပိုနူးစေချင်ရင် ၁၈၀နဲ့ ကြာကြာကင်ပေးပါ…🙂
ဟန်လေးရေ ယိုးဒယား တုံယမ်းဟင်းချိုလုပ်နည်းတော့ တင်ထားတယ်။ တခြား ဟင်းချိုတွေလည်း တင်ပေးပါ့မယ်..😀 https://getacookrecipe.wordpress.com/2010/10/12/ကြက်ခြေထောက်-တုံယမ်းဟင်/
၀တ်ရည်ကလည်း အားပေးလို့ ကျေးဇူးးပါနော်..😛
heee ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးကို တကယ်ချက်ကျွေးချင်တာပါ… လာစားနော်..🙂
နောက်ကျ ၀တ်ရည် တင်ပေးပါ့မယ်..🙂
ဟီးဟီး ဆနွင်းမကင်း ဖုတ်နည်းလေး ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ၀တ်ရည်ကိုယ်တိုင်ကလည်း တခါမှ မလုပ်စားဖူးဘူး။ ဒါနဲ့ ၀တ်မှုံဟုတ်ဖူးနော်၊ ၀တ်ရည်။ ၀တ်ရည်အမွှာညီမ နံမည်ကမှ ၀တ်မှုံ။ ဒါပေမယ့် တူတူပါပဲ.. Thank you too..😀
ok sis I will try to post Myanmar Recipe also!🙂
ok I will post Hot pot recipe soon. Thanks🙂
မီးမီးရေ ပဲကြော်သုတ်က ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ၂ထောင်း လှီးထည့်၊ ဆီနည်းနည်း၊ ဆားနည်းနည်း ထည့်သုတ်ရုံပါပဲ..🙂
Thanks you too!🙂
I will post sis!🙂
ဟုတ်ကဲ့ နောက်ပိုင်းဟင်းတွေကို ကြိုးစားပြီ အချိန်အတွယ်များများနဲ့ ပူးတွဲ ရေးပေးပါ့မယ် ညီမရေ… အားပေးတယ်ဆိုလို့ ၀တ်ရည်ကလည်း အထူးကျေးဇူး..🙂
ok I will bro.. Thanks🙂
sis အရမ်းတော်တာပဲနော် လေးစားပါတယ်🙂 အမြဲတမ်းလဲ အားပေးနေမယ်နော် …🙂 ဟင်းချက်နည်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊
Thanks also par naw!🙂
ွှThanksalot sis yay!🙂
ok I will sis.. thanks you also par sis ya!😛
တခါမှ မစားဖူးဘူး.. ကြည့်ရတာ အချိုမုန့်ထင်တယ်..🙂
ဟုတ်ကဲ့။ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်နော်.. ကျေးဇူးပါ ညီမရေ..🙂
အမဲသားချက်နည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်.. Thanks🙂
Thanks also Ma Thandar!🙂
share ပေးထားတယ်ဆိုလို့ အထူးကျေးဇူးမ။🙂
တို့ဟူးလုပ်နည်းလေးကို https://getacookrecipe.wordpress.com/2010/11/08/တို့ဟူးသုပ်လေး-လုပ်စာြး/ မှာရေးထားပါတယ်..🙂
Mite tal mite tal mite tal🙂
အမ ဟင်းချက်​နည်း​တွေက အရမ်း​ကောင်းပါတယ်​​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ Hot Pot ချက်​နည်း​လေး​တွေရှိရင်​လည်းတင်​​ပေးပါဦးလို့🙂